Udweba kanjani igwababa - drawing isifundo
Uma umculi imfundamakhwela kunenkinga, indlela ukudweba Igwababa nje idinga isigaba okuyinhloko. Elapho ngajwayelana isinyathelo enemininingwane ngesinyathelo incazelo yenqubo.
umculi ngamunye phambi abasebenza indaba emfushane noma umdwebo kumele ahlole into azolibhubhisa ziveza. Ngakho-ke, ngaphambi sithola igwababa, udinga ukubuka izinyoni, empeleni, ukubona amavidiyo wakhe, ngokucophelela izithombe nemidwebo abaculi onekhono. Khona-ke kufanele ukuhlonza main timphawu letehlukene le nyoni kusuka bonke abanye. Lena umzimba esikhulu okusaqanda, amaphiko eside, umbala omnyama izimpaphe futhi uqhwaku nge idolo ezinkulu. Yilokho okufanele kukhulunywe ngazo inqubo umdvwebo, njengoba ukudweba igwababa ukuze waziwe, hhayi nje iveza inyoni enkulu.
Ngaphambi draw iqhude ipensela kumelwe kuqala ukudweba umugqa oqondile, okubizwa ngokuthi-eksisi engela degree angaba 30 kusukela ecaleni ovundlile ishidi - kulesi sikhundla inyoni ngokuvamile igcinwe ngokuvamile uphumule. Okulandelayo ku-eksisi kuyadingeka ukunquma usayizi iqhude esizayo. Kufanele uhlinzeke amaphuzu yokugcina belinganisa ivolumu izinkukhu isithombe ukuze ichopho umsila futhi uqhwaku kungaqali Abut ngokumelene imikhawulo ishidi. Phezu eksisi ibekwe indilinga lencane - kwekhanda, bese i-Oval sasivumela voluminous - umzimba futhi unxantathu - umsila. Ngakho indlela ukudweba igwababa kudingeka ezifuze ekuphileni, kufanele sizame ukwenza umsila nomzimba ku-eksisi kuthatha ibanga elifanayo.
Udweba kanjani isinyathelo iqhude negxathu?
Ngemva ngokwakha iphethini asizayo kuqedile, ungakwazi uqhubekele Umklamo inyoni ukuma. Ukuze wenze lokhu, ikhanda selilonke ixhunywe umzimba imigqa elibushelelezi, elinombala kwenza indaba emfushane ka a uqhwaku esikhulu esingunxantathu. Khona-ke, ekupheleni engezansi okusaqanda-isiqu pririsovyvat ezimbili side kakhulu okusaqanda usayizi encane - kuzoba engxenyeni engenhla ngezidladla - shin. Khona-ke wenza indaba emfushane ka phansi kwamaphiko eligoqiwe eslphambanweni nomsila unxantathu futhi okusaqanda-umzimba.
I-engeli okukhulu unxantathu iguqulwe ibe le caudal ekhoneni ezimbili quin kuya shins pririsovyvat izinyawo Ezintathu, Umbala. Okulandelayo ukuthola iphuzu kusuka kulo kufanele luhlanganise iphiko umugqa. Ukuze wenze lokhu, hlukanisa ngokwengqondo umzimba ngengxenye ngo umugqa ohlanganisa iphuzu ezikude kakhulu okusaqanda, emgqeni ihlukaniswe yaba izingxenye ezintathu. Line iphiko evela phezulu kuqala amaphuzu division.
Manje kubalulekile ukuba banake uqhwaku likhale sika ngiwunike esifanele efomini elifanele - enze Bump elincane phakathi kanye ekhoneni eslphambanweni ikhanda lakhe. Kufanele uhlele uxhumano entanyeni emzimbeni. Kusadingeka ukuqedela amehlo, ingxenye engezansi iphiko kanye irabha ukususa yonke imigqa asizayo.
Imivimbo isetshenziswa isiqondiso ngalé kwezindaba inyoni izimpaphe ekhanda isehlane ekhaleni ndawo, lola Ezansi Uqhwaku. It uhlala kuphela abophe iphethini kahle, ukusebenzisa izithunzi ukuqedela indawo lapho inyoni uhleli - futhi umdwebo usulungile.
Paul Rizhenko: imbangela yokufa. Umculi uPawulu Rizhenko: Biography
Samurai: indlela ukudweba ngokushesha futhi kalula
Imidwebo engcono Konchalovsky - Still Life nge Flowers
Kirov: Art School
Leonid Nepomnyashchy: lokusungula futhi ukuphila komuntu umculi
Indlela enhle ukupenda izimbali: amathiphu wabaqalayo
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ku-Nha Trang: ukubuyekezwa, izici, amamenyu nokubuyekeza
Ukuphefumula (ukugula kwehla): izimbangela kanye nokwelapha
Siwasebenzise ohlelweni ukupholisa
Umlingisi Russian Daniil Vorobyov: Biography, ukudubula ifilimu kanye nempilo yakho
Ishadi lama-akhawunti ... Imiyalelo yokusebenzisa Ishadi lama-Akhawunti
Ehlathini Ussuri: izitshalo, izilwane, ikakhulukazi
Isidakamizwa "Detraleks". Imiyalo yokusetshenziswa
Umoya onomfutho futhi lokho kusetshenziswa njengendlela
Amaholide eGibhithe. Hurghada. "Beach Albatros" ehhotela
Cyprus: 3 aphambili (Protaras futhi ePhafu)